साउथ फिल्मले नेपालमा मनायो ५१ औँ दिन , कति कलेक्सन गर्‍यो? || सुनौलो नेपाल
साउथ फिल्मले नेपालमा मनायो ५१ औँ दिन , कति कलेक्सन गर्‍यो?
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय छक्का पञ्जा ३ , प्रसादपछि खासै फिल्महरुले लगानी सुरक्षित गरी नाफा कमाउन सकेको छैन । कुनै समय यस्तो थियो की नेपाली फिल्महरुले ५१ औँ र सय औँ दिन मनाउने गथ्र्यो । तर अब त यो जोखाना नै हेरेको जस्तो भईसकेको छ । छक्का पञ्जा ३ , जय भोले शत्रु गतेले पनि ५१ औँ दिन मनाएको थियो । हाल रिलिज भईरहेका फिल्महरुले पर्याप्त दर्शकहरु पाउन सकेका छैनन् । हलमालिकहरु झिँगा थपाएर बसिरहेका छन् ।
नेपाली फिल्मले राम्रो कलेक्सन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा साउथ फिल्म केजीएफले भने नेपालमा ५१ औँ दिन मनाएको छ । कन्नड सुपरस्टार यसको अभिनय रहेको हिन्दी भाषामा डब गरिएको शो फिल्म काठमाडौंको सिटी सेन्टरको चौथो तल्लामा रहेको बिग मुभिजमा ५१ औं दिन दिनसम्म पनि रिलिज भईरहेको छ । बितरक मनोज राठीको टिमले १० लाखमा फिल्मलाई नेपाल भित्राएका हुन् । ५१ औँ दिन मनाईराख्ला फिल्मले राम्रै पैसा छापेको अनुमान छ । तर राठीले फिल्मको कलेक्सनबारे भने खुलाउन चाहेनन् ।
नेपालमा बलिउड फिल्म भन्दा पनि साउथ फिल्मलाई रुचाउनेहरु धेरै छन् । फलस्वरुप एक्सन विधामा बनेको यस फिल्मलाई नेपाली दर्शकहरुले पनि निकै रुचाएका छन् । ८० करोडमा बनेको यो फिल्म कन्नड फिल्मकै क्षेत्रमा महंगो मानिएको छ । केजीएफको सफलताले यस पनि रातारात सुपरस्टार बनेका छन् । फिल्मले हालसम्म २५० करोड भन्दा बढि कलेक्सन गरिसकेको छ ।
तेस्रो श्रीमती भित्र्याउन खोज्ने श्रीमानलाई पहिलेका श्रीमतीको रामधुलाई (भिडियो)!